खानेपानी वितरणमा विभेद :कतै दिन बिराएर, कतै तीन हप्तामा एक दिन
मेरो लाइफस्टाइल	|| 18 August, 2021
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले पानी वितरणमा विभेद गर्दा वर्षायाममा पनि भक्तपुर नगरपालिकाका केही स्थानमा खानेपानीको चरम अभाव देखिएको छ । केयुकेएलले नगरका केही स्थानमा दिन बिराएर पानी वितरण गर्दै आए पनि केही स्थानमा पाँच दिनको एकपटक, कतै हप्तामा एक दिन र कतै तीन हप्तामा एक दिन पानी वितरण गर्दै आइरहेको छ । पानी वितरणमा यसरी विभेद गर्दा भक्तपुर–४ र ५ का विभिन्न टोलमा खानेपानीको चरम अभाव देखिएको हो ।
‘तीन हप्ता भयो धारामा पानी आएको छैन । सबै ठाउँमा आउने हामीकहाँ मात्र नआउने भन्ने नि हुन्छ ? कति किनेर खानु ?’, भक्तपुर–४ की हीरादेवी श्रेष्ठले प्रश्न गर्दै भने, ‘गत सातामै धारा खोल्नुपर्ने अहिलेसम्म आएको छैन । आज त धारा खोल्न आउँछ कि भनी आशैआशमा कति बस्नु धारा कुरेर ?’
चुनावमा भोट माग्न आउँदा सबै समस्याको समाधान गर्ने वाचा गर्ने जनप्रतिनिधिले दैनिक अतिआवश्यक खानेपानीको व्यवस्था गर्न चासो नदिएको उनले गुनासो गरे। ‘कहाँ भन्न जाऊ खानेपानीको कार्यालय गए आज हाकिमसाब आउनुभएको छैन भन्छन् । अरु सबै ठाउँमा समयमै पानी आउने । हामीकहाँ मात्र नआउने । पानीमै पनि विभेद गर्छन् । पानी नपठाएपछि शुल्क पनि नलिनु नि । शुल्क भने समयमा तिरेन भने कर भार बोकाउने । यस्तो पनि हुन्छ ?’, उनले भने।
वर्षायाममा पनि सार्वजनिक इनारमा पानी नहुँदा थप अभाव भएको उनले भने। ‘वर्षायाम भए पनि इनारमा समेत पानी छैन । यो टोलमा धेरै पानीको समस्या छ, सबैले इनारको पानीमा भर पर्नुपर्छ । इनारमा पनि पानी छैन । पानीको समस्या बढ्न थालेपछि टोलका दुई–तीन घर मिलेर ट्याङ्करको पानी किनेर दैनिक गुजारा चलाउनुपरेको छ । किनेर कति साध्य ?’ उनले भने ।
त्यसैगरी भक्तपुर–५ की मायादेवी लोहलाले धारामा पानी आउँछ कि भनी कुर्दाकुर्दा दिनै बित्ने गरेको दुःखेसो पोखे। ‘धारामा पानी आउने ठेगान छैन । आज आउँछ भोलि आउँछ भन्दाभन्दै तीन हप्ता भइसक्यो । पानीको समस्याले अरु काम नै लथालिङ्ग भइसक्यो’, उनले भने ।
केयुकेएलको लापरवाही र अनियमितताका कारण पनि नगरका अधिकांश क्षेत्रमा पानीको हाहाकार भएको बताइएको छ । बढ्दो खानेपानीको समस्याले सार्वजनिक ढुङ्गेधारा, इनार र पोखरीमा लुगा धुने पानी लिन आउनेको निकै चाप बढेको छ । हप्तौँसम्म धारामा पानी नपठाए पनि सम्बन्धित निकायलाई केही वास्ता नभएको जनगुनासो छ । नगरका इताछें, वंशगोपाल, भार्वाचो, तौमढी, पोटरीस्क्वायर, घट्खालगायतका ठाउँमा नियमित पाँच दिनमा एक दिन धारा आउँछ । नगरकै आर्दश, खँल्ला, दोगनमा भने तीन हप्तामा एक दिन पनि पानी आउँदैन ।
नगरका अन्य टोलमा पाँच दिनको एक दिन पानी आउने पालो भए पनि नगरका ४ र ५ वडामा दुई हप्तामा एकपटक पानी पठाइने गरिएको छ । सो पानी पनि कटौती गरी नगरका अन्य ठाउँमा पठाउने गरेकाले ती स्थानमा चरम अभाव देखिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । केयुकेएलको शाखा कार्यालयले नगरलाई दुई भागमा विभाजन गरी बोडे पानी प्रशोधन केन्द्र र मुहान पोखरी स्रोत केन्द्र नगरकोटको पानी वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
नगरका खँल्ला, दोगन, देउला टोलमा आउने पानी कटौती गरी अन्यत्र पठाउने गरेका कारण ती टोलमा पानीको चरम अभाव देखिएको हो । केयुकेएलका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘सबैतिर पाँच दिनमा एक दिन पानी वितरण गर्नुपर्ने हो । तौमढीस्थित केही गेष्टहाउससँगको मिलेमतोमा चाबी नै उनीहरुको जिम्मा दिइराखेको छ । पानी आउने बेला बन्द गरिदिने गरेका कारण तौमढीदेखि तल्लो खँल्ला, दोगनटोलतिर पानी नआएको हो । यसमा कार्यालयकै कर्मचारीको हात छ ।’
वर्षायाम होस् या सुक्खायाम, बोडेबाट भक्तपुर नगरमा दैनिक तीन घण्टा पानी पठाउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । नगरका सबै ठाउँमा पाँच दिनको एक दिन दुई घण्टा पानी वितरण गरिरहेको कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र हिमालय श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘नगरको टौमढीदेखि पश्चिम भेगमा बोडेको पानी पाँच दिन बिराएर र पूर्वी भागमा मुहान पोखरीको तीन दिन बिराएर वितरण गर्दै आइरहेका छौँ’, उनले भने ।
उनले नगरमा पानीको अभाव हुने समस्या अहिलेको नभएको बताउँदै भने, ‘यो अहिलेको मात्र समस्या होइन वर्षैँ पुरानो हो ।’
यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि नगरका दुई स्थानमा ट्युबवेल खने पनि पानी पिउनयोग्य नभएपछि वितरण गर्न नसकिएको उनले भनाई छ । नगरका ४ र ५ वडामा पानी वितरणमा भएको अनियमितताका बारेमा अनुसन्धान गर्ने कर्मचारी दोषी देखिए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
भक्तपुरमा दर्ता नभएका निजी धारा छन् । स्थानीयवासीका घरघरमा जडान भएका धारा वषैँ भइसक्दा पनि केयुकेएल कार्यालयमा दर्ता भएका छैनन् । दर्ता नभएका धाराको लाइन काट्न पनि कार्यालयले सकेको छैन । ती धारा धनीले निःशुल्क पानी उपभोग गर्दै आइरहेको केयुकेएलले जनाएको छ ।
नगरलाई सफा बनाउने योजनाअनुरुप जर्मन आयोजनाले ढल विस्तार गर्ने क्रममा सर्वसाधारणले जोडेका धारा अझै दर्ता प्रक्रियामा आउन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।‘ती धारा दर्ता प्रक्रियामा आउन कति अनुरोध गरेँ तर उपभोक्ता मान्दैनन्’, कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘निरीक्षणमा गए जथाभावी गाली गर्ने र कुटौँलाजस्तो व्यवहार गर्छन् । ज्यानकै जोखिम हुन्छ हामीले के गर्ने रु हाकिमहरु आउँछन् जान्छन् उनीहरुलाई त्यसबारे केही मतलब छैन । गाली खाने हामी कर्मचारी नै त हो नि । हामीले मात्र कति भन्नु । एक त समयमा पानी वितरण हुँदैन त्यसको रिस सबै हामीले खानुपर्छ ।’ रासस
बैशाखमै खानेपानीको हाहाकार ! जेठमा के होला ?
#काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड